Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : February 2018
Posted by Junior Win at 4:47 AM No comments:
(အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
Folk Art ဆုိုတာဘာလဲ။ အဲသည်အဓိပယ်ကုို ရှင်းလင်းဖုို့ ၁၉၉၁ ခုနှစ် မေလ ထုတ် American Weekly Newsletter မှာ ဒေးဗစ် အမ် မက်စ်ဖီးလ် (David M.Maxfield) က မေးခွန်းထုတ်ပြထားပါတယ်။
ဆောင်းပါးရေးသူကတော့ သင်က အဲသည်အရာတွေကုို တွေ့လုိုက်ရင် အဲဒါဘာကိုခေါ်တာလဲ ဆုိုတဲ့ အဖြေ ကုိုသိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဆုိုလုိုတာက Folk Art ဆုိုတာ ဘာ ? ဆုိုတာကို တုိုက်ရုိုက်အဓိပယ်တွေ လျောက်ဖွင့်နေမယ့်အစား Folk Art တွေကုို သွားကြည့်ပြီး ဘာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ အဖြေရှာလုိုက်ပါ လို့ပြောတာပါ။ သည်တော့ Folk Art တွေကုို သွားကြည့်လုိုက်တော့ ဘာတွေ တွေ့သလဲတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် Folk Art ဆုိုတာ “လူတွေလုပ်ထားခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ လူတွေက ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့အရာတွေပါ။ ဒါတွေဟာ လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်“ ဆုိုိတဲ့ ဒီမုိုကရေစီဆုိုတာဘာလဲလုို့ အဓိပယ်ဖွင့်တဲ့စာကြောင်းတွေလို အဓိပ္ပါယ်တွေ တန်းစီ ထွက်လာပါတယ်။ (Of the people, by the people, for the people.)
Folk Art ဆုိုတဲ့အတွက် Folk Artist – Folk Art ကုိုဖန်တီးသူ ဆုိုတာ ရှိလာတယ်။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပုိုင် အမြင်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပုိုင်စကြ၀ဌာနဲ့ သူ့ကုိုယ်ပုိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ကမ္ဘာဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ သစ်သားတွေကုို ထွင်းထုတဲ့သူကပြောတယ် – “ကျွန်တော့်အလုပ်က စိတ်ကူးနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်“ တဲ့။ သူက ဒါကုို အနုပညာလုို့ ဆုိုလုိုက်ရင် သူလုပ်ထားတာတွေအားလုံးကုို Fork Art တွေလုို့ခေါ်ရမှာပေါ့။
Folk ကုိုတုိုက်ရုိုက်ပြန်ရင် လူ လုို့ပဲ ဆုိုရမှာပေါ့။ သုို့သော် people လုို့မခေါ်ထားတဲ့အတွက် people လောက်တော့ မကျယ်ပြန့်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူကတော့ သူ့အဓိပယ်ကုို မဖွင့်ခုိုင်းပါဘူး။ Folk Art တွေကုို သွားကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာ ဘာဆုိုတာကို သိအောင်လုပ် လုို့ဆုိုထားတာပါ။ သုို့သော်လည်း သူ့စကားနားမထောင်ပဲနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့် ကြတာပေါ့။ art ကတော့ အခုဆောင်းပါးနဲ့ ကိုက်ညီအောင် အနုပညာလုို့ပဲ ဆုိုကြရအောင်။ သည်တော့ လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ လုို့ပဲအကြမ်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးမှာတော့ Folk Art အကြောင်းတွေကုို ဝေေ၀ဆာဆာ ရေးထားရုံမက Folk Art တွေကုို စုဆောင်းတဲ့သူ နဲ့ Fork Art တွေကုို ပုံများနဲ့ ရှင်းပြထားတာပါ။ သည်တော့ ဆောင်းပါးဆုံးသွားရင်တော့ စာဖတ်သူက သူ့ဘာသာသူ သဘောပေါက်သွားနို်င်ပါတယ်။ လူတွေ ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ အရာတွေအဖြစ် Folk Art တွေကုို ပုံဖော်လုိုက်ရင် အရာရာဟာ အဆုံးမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Folk Art ဆုိုပြီး လူဖန်တီးတဲ့ အရာတုိုင်း ကုို Fork Art လုို့တော့ မခေါ်ပါဘူးတဲ့။
– ၁၉၆၀ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က ပုလင်းဗူးအဖုံးခွံတွေနဲ့ တိရိစာန်ရုပ်ပုံတွေကုို အမည်မသိလူတစ်ယောက်က လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူ့ကုို အနုပညာသည် လုို့ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ အမည်မသိ Folk Artist တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
– ၁၉၃၀ခုနှစ်လောက်က အမေရိကန်နုိုင်ငံသား တစ်ယောက်က မစ်ကီမောက်စ် ပုံကို သစ်သား၊ ငှက်မွေးတွေနဲ့ ထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါဟာ Folk Art တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
– ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ မီချီကန်သားတစ်ယောက်က ၇ ပေမြင့်တဲ့ အမေရိကန်သမတ ဂျယ်ရယ်ဖို့ပုံကုို ထုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူဟာလည်း Folk Artist ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
-လက်နဲ့လုပ်တဲ့ ဒုတ်ချောင်းပုံ ကြိမ်လုံးတွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ တက်တူးဒီဇုိုင်းတွေ၊ ငှက်ပုံဖော်ထားတဲ့ ဒလက်တွေ၊ တူရိယာတွေ၊ လေဒဟပ်တွေ၊ ဘင်ဂျိူဒီဇုိုင်းတွေဟာ Folk Art တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ၁၇ရာစုတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ သစ်သားပေါ်မှာ ထွင်းခဲ့တဲ့ ပြက္ခဒိန်ဟာလည်း Folk Art ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ချီကာဂုိုက လင်ကွန်းပန်းခြံက နံရံတစ်ခုပေါ် ရေးဆွဲထားတဲ့ Folk Art နံရံ တစ်ခု ရှိပါတယ်တဲ့။ သွားကြည့်လုို့ရပါတယ်တဲ့။ ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူက ဘာအတွက် ဘာကြောင့် ဘာပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်တယ် ဆုိုတာတွေကတော့ သုတေသနလုပ်မှ ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
သည်တော့ Folk Art ဆုိုတာ ဒါကုို ကြည့်တဲ့သူရဲ့ မျက်စိထဲမှာ အလှအပတစ်ခုလုို ခံစားမိနုိုင်ပါတယ်။ တချိူ့သော သူတွေကတော့ ၁၈၇၅ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက Folk Art ဆုိုတာ အမေရိကမှာ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး သိပ်ကုို လေးစားမြတ်နုိုးဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆုိုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Folk Art ပရိသတ်တွေကလည်း အဲဒီကတည်းက ရှိနေကြပြီး ယနေ့ခေတ်အခေါ် fan(ပရိသတ်) တွေကနေ ဆုတွေဘာတွေတောင် ပေးခဲ့ကြတယ်လုို့ဆိုပါတယ်။ သူတုို့ကပြောတာတော့ Folk Artist တွေဟာ သင်ကြားပေးသူ လေ့ကျင့်ပေးသူ ဆရာသမားမရှိပဲ သူ့ဘာသာသူ ကုိုယ်ပုိုင်စတုိုင်နဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်ကြသူတွေ၊ အနုပညာသမုိုင်းတစ်ခုကို ရေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေလုို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံ ကြရသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။ အမေရိကမှာ Folk Artist တွေ အယောက် ၇၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှေးခေတ်က Folk Artist တွေကုို လေးစားပြီး သူတုိူ့အနုပညာကုို စိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့သူတွေထဲမှာ နံမယ်ကျော် ပန်းချီဆရာ ပီကာဆုို ပါပါတယ်။ သူက အာဖရိက ကရုိုးရာရုပ်တုတွေနဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကုို အထူး လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သုို့ပေမယ့် တချိူ့သော သူတွေကတော့ အဲသည်လိုဖန်တီးမူတွေကုို ရှာဖွေစုဆောင်း ကြသူတွေကုို သူတို့မှာ ထူးခြားတဲ့ အတွေးတွေရှိပြီး တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ အသိတွေရှိကြတယ်လုို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ တစ်ယောက်ကတော့ ဟားဘတ် ၀ိတ်ဒ် ဟန်ဖီးလ် ဂျူနီယာ (Herbert Waide Hemphill Jr) ဖြစ်ပါတယ်။ သူစုဆောင်းထားတဲ့ Folk Art တွေကုို ၀ါရှင်တန်က အမေရိကန်အနုပညာဆုိုင်ရာ စမစ်ဆုိုနီယမ် အမျိူးသားပြတုိုက် (Smithsonian Institution’s National Museum) မှာ ပြခန်းတောင် ဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့တယ် ဆုိုပဲ။ ၁၉၇၆ခုနှစ်ကတည်းက သူ့ဆီက စုဆောင်းထားတာတွေကုို ပြတုိုက်က ရယူလာခဲ့တာ ၄၂၇ခုလောက်ရှိပါပြီ။ ပြတုိုက်မှာ ပြသဖုို့ဆုိုရင် အဲသည်လောက် အရေအတွက်ကတော့ အနည်းဆုံးရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဆောင်းပါးရဲ့ခုနှစ် ၁၉၉၁ အရ သူ့ရဲ့ ပြခန်းကုို အဲသည်ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လစ်ပြသခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။)
သူ ၁၉၅၀ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၀ခုနှစ်ကြား စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေများလဲလုို့ ကြည့်လုိုက်တော့ လေတုိုက်ရင် လည်တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ၊ ပင်အပ်လေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အဆင်တန်ဆာတွေ၊ ပန်းချီကားတွေ၊ ဒုတ်ကောက်တွေ၊ လေဒဟပ်လေးတွေ၊ စီးကရက်ဘူးခွံတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိူးစုံပစ္စည်းတွေ စသဖြင့်စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက Folk Art တွေပါပဲ။ ဆုိုလုိုတာက ဘယ်သူမှန်းမသိ၊ အမည်မသိတဲ့ သူတွေက သူတုို့စိတ်တုိုင်းကျ ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ သူတုို့ဟာ အမည်မသိ Folk Artist တွေဖြစ်တယ်။
သည်တော့ Folk Artနဲ့ ဒါတွေကုို စုဆောင်းသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မူဟာ ၁၉ ၃၀ နဲ့ ၁၉ ၄၀ ခုနှစ် တွေကြားကတည်းက စတင်ခဲ့ကြတယ်လုို့ဆုိုတယ်။ “ဟန်းဖီးလ်ဟာ ၂၀ရာစု Folk Art ကုို ကြိုးစားဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက အရင်ကရှိခဲ့ပြီးသား အနုပညာရပ်တစ်ခုရဲ့ ဖြစ်တည်မူကုို ပြသခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်“ လုို့ပြတုိုက်ကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လင်ဒါ ရုိုစကုို ဟာတီဂန် (Lynda Roscoe Hartigan) ပြောပါတယ်။ ဟန်းဖီးလ်က ဒီ Folk Art တွေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ စကားရည်လုဖုို့လည်း စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ သူကလူတွေကြားမှာ ရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာတည်ဆောက်မူတစ်ခုကို စုဆောင်းပြီး လူထုရှေ့ချပြခဲ့တာပါ။ ဟုိုးတုန်းကလူတွေက သည်လုိုပစ္စည်းလေးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ် – ဒါပဲ – အဲဒါသူပြောချင်တာပါ။
ပြတုိုက်ကုို မဖွင့်ပြခင်မှာ တာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ ဟာတီဂန်က ပြပွဲလာကြည့်မယ့်သူတွေဟာ ၁၉ ရာစု Folk Art တွေကုို ကြည့်ရင်းနဲ့ Folk Art ရုိုးရာယဉ်ကျေးမူတစ်ခုကို မတွေ့မမြင်ကြပဲ တလွဲအမြင်စောင်းသွားမှာကုို စုိုးရိမ်လုို့ ကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။ သိပ်ပြီး မျော်လင့်မထားဖုို့။ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကြည့်ကြဖို့ စသဖြင့် စသဖြင့်။ (ပစ္စည်းအစုတ်ပလုပ်တွေ ပြထားတာ လုို့အထင်ခံရမှာကို စုိုးရိမ်ပုံပါပဲ။)
နယူးဂျာဆီမှာ မွေးဖွားသူ ဟန်းဖီးလ်က သူငယ်စဉ်ကတည်းက ခရုခွံနဲ့လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ၊ အရောင်ချယ်ထားတဲ့ ခရုခွံလေးတွေ၊ ပုို့စကပ်တွေ၊ တံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ ပိုက်ဆံအကြွေတွေကုို စုဆောင်းတာ ၀ါသနာပါခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အရုပ်လေးတွေ၊ ဖန်ထည်ပစ္စည်းတွေကုိုလည်း စုဆောင်းရတာ သဘောကျတယ်။ သူကျောင်းသားဘ၀မှာ သူ့စိတ်ဝင်စားမူက အနုပညာနဲ့ စာပေဆီကုို ရောက်သွားတယ်။၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ နယူးယောက်မှာ အခြေချတယ်။ သူပုံမှန်သွားတဲ့နေရာက ပြတုိုက်တွေ ဖြစ်တယ်။ အာဖရိကတုိုက်က မျက်နှာဖုံးစွပ်တွေ၊ အလှအပအဆင်တန်ဆာတွေကုို စုဆောင်းတယ်။ ၁၉၅၆ခုနှစ်မှာ သူ့ငယ်စဉ်တုန်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတွေကုို ပြန်သတိရပြီး သူလျောက်ရမယ့်လမ်းဟာ သည်လုို ပစ္စည်းတွေကုို စုဆောင်းတာပဲဆုိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။
၁၉၈၁ခုနှစ်မှာ ဟန်းဖီလ်းက သူ့လုိုပဲ ပစ္စည်းတွေ စုဆောင်းသူမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကုို ပြောခဲ့တာတော့ “လူတွေက ဦးထုတ်အသစ်လေးတစ်လုံး၊ အကျီအသစ်တစ်ထည် ၀ယ်ဖုို့အမြဲလုိုအပ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်လည်း အဲသည်လုို ပါပဲ။ အဲသည်စိတ်ကလေးက အသစ်အသစ်သော အရာတွေကုို ရှာဖွေချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်လာတာလို့ ထင်တာပဲ။ “ (ဒီနေရာမှာ သူဆုိုလုိုတဲ့ အသစ်အသစ်သောအရာတွေ ဆုိုတာ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေ၊ ခေတ်မှီတဲ့ အရာတွေကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုိုးရှေးတုန်းကနှစ်တွေမှာ ရှေးလူတွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သူ မတွေ့မမြင်ဘူးသေးတဲ့ Folk Art တွေကုို ဆုိုလုိုတာပါ။ ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ ဆုိုပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ အသစ်အဆန်းပေါ့။)
ပြတုိုက်ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်ကတော့ ဟန်းဖီးလ်ကုို အခုလုို မေးခွန်းထုတ်တယ်။ “ဒါတွေအားလုံးက ခင်ဗျားအပုိုင်လား ဒါမှမဟုတ် သူများဆီက ငှားထားတာတွေလား။“တဲ့။
ဟန်းဖီးလ် ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တခွင် သွားရောက်ကာ ဒီလုိုပစ္စည်းလေးတွေ စုဆောင်းခဲ့တာပါ။ ဟာတီဂန်က “Folk Art တွေဟာ လူတွေဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်။ စွန့်ပစ်ခဲ့တာတွေ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကူးညဏ်ကွန့်မြူးပြီး တီထွင်ကြံဆပြီး ပစ္စည်းလေးတွေလုပ်ပြီး ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ သည်အတုိုင်း ထားခဲ့ကြတာတွေပါ။ တစ်ခုဆီမှာ အဓိပယ်တွေ ရှိနေတယ်။ သတိူု့ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ကြားနုိုင်တယ်။ သူတုို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေ သမုိုင်းတွေ စီးဝင်နေတယ်။ သူတို့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြည့်လေ သူတုို့နံမယ်တွေတောင် ထုိုးမသွားဘူး။“ လုို့ Folk Artတွေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ သူ့အမြင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ဟန်းဖီးလ် စုဆောင်းထားတဲ့အထဲက အမည်မသိပန်းချီဆရာရဲ့ “သမင်နဲ့ကျောက်တုံးဆီက ပဲ့တင်သံ“ လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ ပန်းချီကားကုို ကြည့်လုိုက်ပါ။ “ပန်းချီထဲမှာ သမင်ကြီးတစ်ကောင်က ပန်းချီကားရဲ့အလယ်လောက်မှာ ရှိတယ်။ ပန်းချီကားရဲ့အစွန်မှာ မြင်း၂ကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းကုို ရေးဆွဲထားတယ်။ ကားချပ်ရေးသူက ပန်းချီကားကြည့်သူရဲ့ အာရုံကုို နောက်ခံက စီးကျလာတဲ့ နှင်းတွေနဲ့ ကျောက်တုံးတွေဆီက အသံကုို ကြားသွားအောင် ဆွဲယူလုိုက်တယ်လုို့ ဆုိုချင်ပါတယ်။ အခုအဲသည်ပန်းချီကားကုို ပြတုိုက်မှာ ချိတ်ထားတယ်။ သည်ပန်းချီကားဟာ ရှေးလက်ရာတစ်ခုကို ပြသနေတယ်လုို့ ကောက်ချက်ချချင်ပါတယ်။“
ပန်းချီကားကုို ၁၈၅၀ခုနှစ်နောက်ပို်င်းလောက်က လုို့ မှန်းဆပြီး ရော့ကာဖယ်လာ ဖုဒ်အာ့ စင်တာ (Rockerfeller Fork Art Centre) အတွက် ပြတုိုက်တင်ဖို့ ပုို့ခဲ့သောလည်း အဲသည်ပန်းချီကားဟာ မှန်းထားတဲ့ ခုနှစ်ကုို အကြောင်းပြပြီး အပယ်ခံခဲ့ရဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟန်းဖီးလ်က တော့ ခုနှစ်တွေကုို ဂရုမစုိုက်ပါဘူး။ ဟာတီဂန်က ပြောရာမှာ “ဟန်းဖီးလ်က ဒီပန်းချီကားကို နှစ်သက်တယ်။ ပန်းချီကားရဲ့ ရှူပ်ထွေးတဲ့ ရေးဆွဲမူနဲ့ စုတ်ချက်တွေဟာ သူ့ရင်ကိုလာထိတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲသည်ခုနှစ် ကာလလောက်က ဖြစ်မယ်လုို့ ယူဆတယ်။ အဲဒါပါပဲ။“ အဲသည် စင်တာက ယနေ့လက်ရှိ (၁၉၉၁ခုနှစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်) ဒါရုိုက်တာ တစ်ဦးကတော့ အဲသည်ကားချပ်ကုို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ သူကတော့ “လွတ်သွားတဲ့ငါးတစ်ကောင်“ လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲသည် “ငါးတစ်ကောင်“ က ပြတုိုက်တွေမှာ ဟန်းဖီးလ်ရဲ့ ရတနာတစ်ပါးလုို တန်ဖုိုးထား ပြသခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Fork Art တွေကုို ပညာတတ်တွေ၊ ပစ္စည်းစုဆောင်းသူတွေနဲ့ လူထုကြား ဆက်သွယ်မူတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်လာဖုို့ကုို ပြတုိုက်တာဝန်ခံ ဟာတီဂန်က မျော်လင့်ထားပါတယ်။
ပြတုိုက်ကုို တာဝန်ခံပြသသူတွေက လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ၊ ၀ါသနာပါသူတွေဟာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဆွေးနွေးလာမယ်၊ တစ်ယောက်အမြင်ချင်း ဖလှယ်မယ်။ သည်လုိုနဲ့ Fork Art ဆုိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဟာ ပြတုိုက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အစိတ်အပုိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံလာမယ် ဆုိုပြီး ယူဆထားပါတယ်။
ပြတုိုက်မှာ တင်ထားတဲ့ပန်းချီကားတစ်ခုဆုိုရင် ရောင်စုံခဲတံနဲ့ စာရွက်ပေါ် ရေးဆွဲထားတာပါ။ လူ၂ယောက်ပုံ (ထုံးထားတဲ့ ဆံတုံးကုို ကြည့်ပြီး အမျိူးသမီး၂ယောက်လုို့ ယူဆပါတယ်။) က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကျောခုိုင်းပြီး လက်ဟန်ခြေဟန်ပြနေပုံပါ။ သူတုို့ရှေ့မှာ အမြှီးရှည်ရှည်နဲ့ ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကလည်း သူတုို့လုို လုိုက်လုပ်နေပါတယ်။ ရေးဆွဲမူဒီဇုိုင်းနဲ့ ပုံပန်းသဏာန်ကုိုကြည့်ပြီး ၁၉၄၀ ခုနှစ်လုို့ တပ်ထားပါတယ်။ အဲသည်ပန်းချီကားကုို အခုပဲ (၁၉၉၁ခုနှစ်ကုို ဆုိုလုိုပုံရပါတယ်) စမစ်သုိုနီယမ် ပြတုိုက်ကို လာလှူသွားတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကတော့ ဟာတီဂန်နဲ့ သူမရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာ ဟန်းဖီးလ်ရဲ့ စုဆောင်းထားသမျှ တွေကုို ဂရုတစုိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းကုို ကြည့်ပြီး ဒါကတော့ ဘာနဲ့လုပ်ထားတယ်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဒါကုို ဘယ်ကရနုိုင်သလဲ၊ ဘယ်တုန်းက အရာတွေဖြစ်နုိုင်တယ်၊ ဘယ်လုိုလူတန်းစားတွေက လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်မလဲ၊ သူတုို့က ဘယ်လုိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ဥပမာ- သံဗူးလေးတွေနဲ့လုပ်တဲ့ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ကုို ၀တ်ဆင်ပေးထားတဲ့အကျီလေးတွေ၊ ထုထွင်းထားတဲ့ မျက်နှာအမူအယာ၊ ဆောင်းထားတဲ့ ဦးထုပ်၊ ကိုင်ထားတဲ့ ဘင်ဂျိူလုို အတီးအမှူတ်လေးတွေ၊ သူ့ရဲ့ဆံပင်ပုံစံ အစရှိသဖြင့်ကုို သုတေသနလုပ် လေ့လာကြပါတယ်။ ဒီလုိုလေ့လာဆန်းသစ်ပြီးမှ သည် Folk Art ဟာ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်နုိုင်တယ် ဆုိုပြီး အဖြေထုတ်ကြရပါတယ်။
အမည်မသိတွေအပြင် တချိူ့သော အမည်သိပညာရှင် တွေရဲ့လက်ရာတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဥပမာ ၁၉၇၀ခုနှစ်လောက်က စတီဗင် အက်ရ်ှဘီ (Steven Ashbly) လုပ်ခဲ့တဲ့ သစ်သားပေါ်မှာ ဆေးရောင်စုံ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီလက်ရာမျိူးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိူးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဦးခေါင်းနဲ့ ကုိုယ်ခန္တာကုို ရေပေါ်ထုိုးတဲ့ ကရိယာနဲ့ သစ်သားပေါ် လုပ်ထားတာလုို့မှန်းဆရပါတယ်။ အမျိူးသမီးလေးက ဦးထုတ်နီလေးဆောင်းထားတယ်။ အ၀တ်အစားက အဖြူရည်ရောင် မပေါ့်တပေါ် အောက်ခံ သစ်သားခြစ်ရာများနဲ့ ကိုယ်လုံးကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ ဓါးသွားတွေ၊ ရေပေါ်ထုိုးတာတွေ၊ အ၀တ်စ၊ နုိုင်လွန်အစနဲ့ သစ်သားအစင်းရာတွေနဲ့ “ခေါင်းငြိမ့်နေတဲ့ အမျိူးသမီးလေး“ (Nodding Woman) လို့အမည်ပေးထားပါသတဲ့။
ဟာတီဂန်က ပြောရာမှာ “အဲဒီလက်ရာကုို လူတချိူ့က သဘောမကျကြဘူး။ အဲဒါကုို ကြည့်ပြီး – ဒါအမှိူက်ပဲ – လို့ပြောကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ အဲသည်လုိုအရာကို ပြသသူတွေက တန်ဖုိုးထားကြတယ် ဆုိုတော့ ပြီးတာပါပဲ။ တချိူ့သော ကုိုယ့်ဘာသာကုိုယ် တီထွင်ကြံဆသူတွေက တဆင့်တဖန်ပြန်သုံးလုို့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ လုပ်ကြပြီး ဖန်တီးယူတတ်ကြသူတွေဟာလည်း တချိန်ကျရင် Fork Art တွေအဖြစ် တန်ဖိုးထားစရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူပြောမလဲ။” (ဥပမာ – မြန်မာပြည်မှာလည်း လက်မူပညာသည်တွေက သုံးပြီးသား ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ သံဗူးတွေ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ၊ ပုိုက်တံလေးတွေ၊ တူကလေးတွေ၊ ဗူးခွံတွေနဲ့ တချိူ့တွေ အလှအပပစ္စည်းတွေ လုပ်ကြတယ်လေ။ ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးတွေ၊ အရုပ်တွေ၊ ဂျိတ်တွေ၊ ကလစ်လေးတွေ၊ လက်ကုိုင်အိတ်တွေ၊ လက်စွပ်လက်ကောက်ဆွဲကြိုး၊ နားကပ်တွေ၊ ကြယ်သီးလေးတွေ လှလှပပ နဲ့ ထွက်လာတဲ့ လက်မူထည် ပစ္စည်းတွေဟာလည်း Folk Art တွေပါပဲ။)
ဟန်းဖီးလ် ဟာ ၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ကာ အသက်၆၉ နှစ်အရွယ်မှာ နလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ “ဟန်းဖီးလ်ကြောင့်သာလျှင် Fork Art တွေဆိုတာ ဘာလဲဆုိုတဲ့သဘောတရားကို လူတွေသိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကသားတွေအတွက် သူ့ကုို အကြီးအကျယ် ဂုဏ်ပြုလောက်ပါတယ်“ လုို့ နယူးယောက်စီးတီးက American Fork Art ပြတုိုက်က ဒါရုိုက်တာ ဂဲရက် စီဝါကင် ကပြောပါတယ်။
သူကုို ၃၆၀ဒီဂရီအမြင်ပုိုင်ရှင် လို့ အမည်ပေးကြတယ်။ သူက သူ့ပတ်ပတ်လည်က ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းဆုိုင်တွေ၊ လမ်းဘေးဈေးတွေကုို သွားတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အရာဝတ္တုတွေကုို ရှာဖွေတယ်။ သာမန်မဟုတ်တဲ့ လက်လုပ်ပစ္စည်းလေးတွေကုို ဂရုတစုိုက်လေ့လာတယ်။ အဲသည်လုို ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်ယူစုဆောင်းထားတာ အရေအတွက် ၃၀၀၀ တောင် ရှိလာပြီးတဲ့နောက် ပြတုိုက်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြသဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် Fork Artပြတုိုက်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ကုိုးကားရရင် “သူဟာ ကော်မတီထဲက တက်ကြွတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပြတုိုက်ကုို ရောက်လာတဲ့ Folk Art တွေကုိုလည်း ဂရုတစုိုက် ကြိုဆုိုတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဆီက အမြဲကြားရလေ့ရှိတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ သူ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့၊ သူ့ကုို လာပြတဲ့ Fork Art တွေကုို တွေ့တုိုင်း သူက – ကျွန်တော့်အိမ်မှာ အဲသည်လုိုပစ္စည်းလေးရှိတယ်ဗျ၊ ကျွန်တော်ယူလာပြဦးမယ် – တဲ့။“
(၁၉၉၁ ခုနှစ် မေလ ထုတ် American Weekly Newsletter မှ ဒေးဗစ် အမ် မက်စ်ဖီးလ် (David M.Maxfield) ၏ The Unexpected is Found in an Intrepid folk Art Collection ကုို မှီငြမ်းဘာသာပြန်ဆုိုကာ Robert Smith Herbert ၏ Waide Hemphill Jr., Folk Art Collector, Dies at 69 (May 13, 1998) နှင့် Steve Ashby ၏ Renwick Gallery, နှင့် Wiki Folk Art မှ အချက်အလက်များကုို စုပေါင်းရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by Junior Win at 2:13 AM No comments:
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ကမ္ဘာ မကျော်သော အဆိုအမိန့်များ
(အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈
ဤဆောင်းပါးတွင် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာမကျော်သော အဆိုအမိန့် များကို ရေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူကသာ မှတ်တမ်းတင်ရေးသားပြီး အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်းကသာ ထည့်မပေးလျှင် ဘယ်သူမှ မသိဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလည်း ပျောက်ကွယ် မသွားဟုအာမ မခံနိုင်ပါ။
ယခု ကျွန်တော့ ဖခင်ဦးခင်မောင်လတ်ပြောသောအဆိုတခုဖြင့်စပါမည်။ ဤအဆိုအမိန့် ဖြစ်လာပုံအဖြစ်အပျက်ကလေးနဲ့ချင်ပါသည်။ တစ်ချိန်က Art for People’s Sake (အနုပညာသည် ပြည်သူ့အတွက်)ဟူသော အဆိုသည် လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားတွင် အတော်ခေတ်စားခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစိုးရအကြိုက်ကို လိုက်လံ၍ ပြောသူများ နှုတ်ဖျားတွင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ မည်သည့်အစိုးရကိုမှ မဖားသောကြာင့် လူတိုင်းဟူသည့်အထဲတွင် မပါခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော်၏ဖခင်သည် လုပ်သား (အင်္ဂလိပ်) သတင်းစာတွင် အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောကြောင့် ထိုအဆိုအမိန့် နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုပြောရန်
ကျွန်တော်အဖေ၏ ရာထူးအရ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဝါဒဖြန့်ထားသောအဆိုအမိန့် ကိုထောက်ခံရန် တာဝန်ရှိပါသည်။အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သောကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဤသို့မေးပါသည်။ဆရာကြီး Art for People’s Sake (အနုပညာသည် ပြည်သူ့အတွက်) ဆိုတာကို မထောက်ခံဘူးလား။ အနုပညာဟာပြည့်သူ့အတွက်မဖြစ်ရင် ဘယ်သူ့ အတွက်ဖြစ်ရမှာလဲ ဟူ၍ မေးပါသည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော်အဖေကလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဤသို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။”Yes, I agree that art must be for people’s sake, but remember it must be art, not trash or not just propaganda …” အဓိပ္ပာယ်မှာ အေး..အနုပညာသည် ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတာကို ထောက်ခံတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အနုပညာဆိုတဲ့အတိုင်း အနုပညာဖြစ်ရမယ်။ အမှိုက်သရိုက်ဝါဒဖြန့်ခြင်းသက်သက် မဖြစ်ရဘူး။
ဤအဆိုကိုတော့ ထောက်ခံသူလည်း မရှိပါ။ မည်သူကမှလည်း လိုက်၍မပြောပါ။
နောက်ရေးလိုသော အဆိုအမိန့်မှာ ပစ္စည်းပျောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။ အိမ်တိုင်းတွင် ပစ္စည်းပျောက်တတ်သောပြဿနာ၊ ကိုယ်တစ်နေရာတွင် ထားလိုက်သော ပစ္စည်းသည် ထိုနေရာတွင်မရှိတော့သည့်ပြဿနာ ကြုံဖူးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးဆရာ ဦးထင်လင်းပြောသောအဆိုကို လူတိုင်းက နားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
စာရေးဆရာဦးထင်လင်း နှင့် ကျွန်တော့်အဖေ ဦးခင်မောင်လတ်တို့၏ အပြန်အလှန် စကားမှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဦးထင်လင်း- ” ကျွန်တော့စာအုပ်ကလေး ဒီမှာ သေချာထားတာ အခုမရှိတော့ဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။”
ဦးခင်မောင်လတ်- “ပစ္စည်းဆိုတာ ဒီလိုပဲပေါ့ကွ။ ကိုယ်ထားတဲ့နေရာမှာ ဘယ်အမြဲရှိမှာလဲ။ သူများလည်း ယူသွားနိုင်တာပဲ။”
ဆရာဦးထင်လင်း – “မဟုတ်ပါဘူးကိုလတ်ရာ။ ဟိုအပြင်က ကျောက်တုံးကြီးဆိုရင် ဒီမှာပဲရှိနေတာ ကြာပြီ၊ ဘယ်မှရောက်မသွားပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း ယူမသွားပါဘူး။”
ဤသည်ကား ဦးထင်လင်း (ကျွန်တော့် အခေါ် ဦးလေးကိုသိန်းမောင်) တို့၏ အပြန်အလှန် စကားများဖြစ်သည်။ ဦးလေးကိုသိန်းမောင်ပြောသော ဟိုနားကကျောက်တုံးကြီးအကြောင်းကို ကျွန်တော်သည် ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပျောက်တိုင်းပြောလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီး တက္ကသိုလ်
ရွှေရီဝင်းကလည်း ကျွန်တော့်အဖေပြောသလို ပစ္စည်းဆိုတာ ဒီမှာအမြဲဘယ်ရှိပါ့မလဲ ဟူသောစကားဖြင့် ပြန်ပြောလေ့ ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဦးလေးကိုသိန်းမောင် ပြောသော ဟိုနားက ကျောက်တုံးကြီး အကြောင်းကို ယနေ့တိုင်မမေ့နိုင်ပါ။
နောက်ပြောလိုသော အကြောင်းတစ်ခု မှာ ကျွန်တော့်သား မောင်ရစ်ပြောသော စကားဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားမှာလည်း ကျွန်တော့်တို့မိသားစုနှင့် အသိုက်အဝန်းတွင် ပြန်ပြောလေ့ရှိပါသည်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။
“ဖေဖေ color blind ကာလာဘလိုင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ”
“ဖေဖေ သိတာကို ပြောရရင် လူတစ်ယောက်ဟာ အရောင်တွေကိုမမြင်ရဘဲ BLACK AND WHITE အဖြူနဲ့ အမည်းကိုပဲ မြင်ရရင် ကာလာဘလိုင်းလို့ ခေါ်တယ်ကွ။ ဥပမာ ပြောရရင်ကွာ မင်းတို့တွေ အဖြူအမည်း ရှပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပေါ့ကွာ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ တကယ်ဘဲ အဖြူအမည်း ကိုပဲ မြင်ရတာ ပြောတာ”
မောင်မောင်ဝင်း (မောင်ရစ်)သည် ခေတ္တ စဉ်းစားနေပြီး အခုလိုပြောလိုက်သည်။ “ဒီလိုဆိုရင်
ကျွန်တော်လည်း ကာလာဘလိုင်း ဖြစ်ကြည့်ချင်လိုက်တာ”
နောက်ပြောချင်သောအကြောင်းအရာ တစ်ခုမှာ ကြောင်ကို မီမီ၊ မီမီ ဟုအဘယ်ကြောင့် ခေါ်သည်ဟူသော အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြောသောသူက ကျွန်တော်၏အဘွား (အမေ၏အမေ) ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ငယ်စဉ် ကလေးဘဝက ကြောင်ကို ဘာကြောင့် မီမီ မီမီ ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည့် အကြောင်းကို ကျွန်တော်က အဘွားကို မေး၍ အဘွားက ဖြေတာလား၊ (သို့) အဘွားက ‘မြေးလေး … ကြောင်ကို ဘာလို့ မီမီ မီမီလို့ခေါ်ရင် ကြောင်ကလာတာလဲ သိသလား။ မသိရင်အဖွား ပြောပြမယ်” လို့ စပြောတာလားဟူသည်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ အဘွားပြောသောအကြောင်းမှာ ကားဤသို့ဖြစ်ပါသည်။
ကြောင်စကားနဲ့ ငါးကို ‘မိုင်မိုင် လို့ခေါ်တယ်။ ဒီတော့ ကြောင်ကို မီမီ မီမီ လို့ခေါ်လိုက်ရင် သူက မိုင်မိုင် မိုင်မိုင် လို့ ကြားတော့ ငါးစားရတော့မယ်ဆိုပြီး ကြောင်က ပြေးလာတာ”
ပညာရှင်များအနေနဲ့ အဘွားပြောသောစကားတွင် အားနည်းချက်တွေ တွေ့ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့တော့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက အဘွားပြောသော စကားကိုယုံပါသည်။ ယခုလည်း အဘွား၏စေတနာနဲ့စကားကို မမေ့နိုင်ပါ။ ယခုဘဲ ကျွန်တော့်ကြောင်တွေ နံနက်စာ စားဖို့အချိန် ရောက်ပြီ။ ခေါ်လိုက်ဦးမယ်။
“မိုင်မိုင် မိုင်မိုင် မီမီ မီမီ….”
နောက်ပြောချင်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ မေမေ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ပြောသောစကားဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမကြီး ပြောသည့် စကားဆိုတော့ တော်တော်နက်နဲမှာပဲလို့တော မထင်လိုက်ကြပါနှင့်။ မေမေကလည်း သာမန်လူသားတစ်ယောက်ဆိုတော့ သာမန်လူပြောတတ်သော စကားမျိုးဖြစ်ပါသည်။
ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက စာရေးသည့်အခါတွင် ဖောင်တိန်သုံးခဲ့သော ခေတ်တစ်ခေတ်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က မင်အိုးများဝယ်ထားပြီး ဖောင်တိန်ထဲသို့ မင်ထည့်၍ သုံးရပါသည်။ မေမေသည်လည်း ဖောင်တိန်တွေ သုံးလေးချောင်းနှင့် မင်အိုးတွေ ဝယ်ထားပါသည်။ ဖောင်တိန် တစ်ချောင်း မင်ကုန်သွားရင် နောက်တစ်ချောင်းကို သုံးပါသည်။ သို့သော်လည်း တခါတရံတွင် ဖောင်တိန်တွင် အားလုံးတွင် မင်မရှိဘဲ ကုန်သွားသည် အခါများလည်း ရှိပါသည်။ နောက်ပိုင်း ဘောလ်ပင်များ ပေါ်လာသောအခါ ဖောင်တိန် ခေတ်မရှိတော့ပါ။ ယခုခေတ်လူငယ်များသည် ဖောင်တိန်ဟူသည်ကိုပင် ဘာမှန်းသိမည် မဟုတ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် မေမေဒေါ်ခင်မျိုးချစ်သည် ဖောင်တိန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောသောစကားကို ယခုခေတ် လူငယ်တော်တော်များများ က နားမလည်လျှင် ခေတ်ကိုမီသောသူ များက ရှင်းပြလိုက်ပါ။
မေမေဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ပြောသောစကားမှာ တော်တော်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါသည်။ “ဖောင်တိန်ရဲ့အဆိုးဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ မင်ကုန်သွားရင် လုံးဝကို ဘာမှ ရေးလို့မရတော့ဘူး”
ဒီတော့ ကျွန်တော်က မေမေ့ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဘောပင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။
Posted by Junior Win at 2:09 AM No comments: